isifinyezo : Tum
Wasekelwa : 1868
abafundi (ngu.) : 40000
Ungakhohlwa discuss Technical University of Munich
Technical University of Munich ungomunye emanyuvesi Europe ephezulu. It izibophezele excellence ucwaningo kanye nokufundisa, imfundo imikhakha eyahlukene kanye nokugqugquzela esebenzayo lososayensi abasha kuthembisa. Inyuvesi futhi kwakha baxhumene kakhulu izinkampani kanye nezikhungo ngokwesayensi emhlabeni jikelele. Tum kwaba omunye amayunivesithi okuqala eJalimane ukuba uqambe University of Excellence. Ngaphezu kwalokho, Tum njalo lifaka phakathi best amayunivesithi European rankings international in.
Siyakwamukela ku-Technical University of Munich! Enyuvesi yethu itholakala ngokuba sibuyele emuva ngonyaka owasungula 1868, kanye nomqondo kubonisa ikufakazele kuwufanele yayo ngokusebenzisa le minyaka: imfundo enhle kakhulu eyala zesayensi kanye technical, nginomdlandla nokuyenga kanye adventure yocwaningo, ukuhlakulela kokubili uhlamvu siqu kanye namasiko ehlanganyelwe. Phakathi kwalabo abaye bahlola, wafundisa, futhi ucwaningo lapha kukhona izibalo ovelele esidlule zomlando kanye namuhla: Nobel Prize abawinile, onjiniyela evelele, osomabhizinisi, Izibani ehola abaye ezimise indlela esiphila. alumni abaningi owangena imfundo yabo nathi sibe, ngokusebenzisa imisebenzi yabo, isihambile ukuthuthukiswa umphakathi olwazini.
39,081 abantu abasha, 22% amaphesenti angu bani zivela ngaphandle Germany, are studying in our 13 iminyango academic. Kuyinto ukuthi umoya ebhizinisi, e lubonakaliswa ovulekile wokuncintisana, okuletha izinhloso zethu ezintathu ezinkulu ophawulekayo: scholarship zesayensi, internationality, nezamabhizinisi.
Futhi yini eye yabenza inyuvesi ukwandisa sesimweni abahlonishwayo esiteji izwe umuzwa onamandla wokuba yingxenye yomphakathi okukhuthaza iziphiwo ukusebenza kanye ayiboni imingcele imvama. Omunye ubufakazi obubonakalayo ubumbano Tum lomkhaya umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zethu amanxiwa a iMpi Yezwe ukuthi azichithile up to 70 abangamaphesenti angu-nyuvesi. Namuhla Tum has izakhiwo ezingaphezu kwamakhulu amane ekuchithweni kwayo on Munich yethu at, Garching, futhi Freising-Weihenstephan sites.
Technical University of Munich uyaqonda uqobo ukuba abe inceku yomphakathi ukuthi njalo ubhekene nezinselele ezintsha ezivela inqubekela kwembulunga yonke. Lokhu kudinga ngokomthetho abanekhono ochwepheshe abasebasha ezivela ezimpikweni abaningi ukugcwaliseka, ngendlela imikhakha eyahlukene, ukuze izimpikiswano ezinkulu ngekhulu: ezempilo kanye nokudla; amandla, Isimo sezulu, kanye nemvelo; okumbiwayo kwendalo; ukuhamba kanye nengqalasizinda; zokuxhumana kanye nokwaziswa. Siye bamukela lezi “themes ngekhulu” nelethu, futhi anqume izinhloso zethu zocwaningo.
Isu yesikhungo zenzelwe German Excellence Initiative 2006 - “Tum. The lwebuhwebi University” - Wavula imikhondo entsha ekubeni eyunivesithi yokuncintisana ngesibindi kwesiqu international. Tum Graduate School emelela format lesichubekako semfundo ehlelekile zobudokotela. Lwenza ososayensi abasha futhi onjiniyela ukuba bakhe bobabili amaphrofayli zabo zokuqondisa izigwegwe futhi ebanzi, HORIZONS transdisciplinary. In the Tum Institute for Study Kuthuthukile, amathalenta omuhle thola okudala ucwaningo amathuba kanye ikamelo for inkulumo imikhakha eyahlukene. Njengoba uhlelo lwethu olusha career, Tum Faculty kwabahlali Track (2012), Sethule noguquko in ohlelweni university German.
Labo abatadisha at Technical University of Munich namuhla babe nezindlela eziningi. Thina nje kuphela anikele-first class imfundo eliqondisa izigwegwe, kodwa ziphinde zikhuthaze imisebenzi emphakathini-building ngalé zokuphila kwansuku zonke umfundi. We ukwethula abafundi bethu yokwenza ucwaningo lwesayensi ngendlela efanele usaqala. Thina khaphi them ibe ukulwela njalo entsha kanye yokuzamazama. We bazinike isikhathi, amandla, nezinto abantu abanamakhono ngensizwa eyabonwa sihlakulela futhi inselele. Sifuna ukwenza kubo, ngangokunokwenzeka, “weatherproof” ngoba konke lokho abangase bahlangabezane nako enkonzweni yabo esikhathini esizayo professional.
ikhasi lethu ekhaya ihlose ukukwazisa ngokucophelela mayelana kobuchwepheshe Universität München, kuyilapho ngesikhathi esifanayo uzipha umuzwa wokuthi singobani njengoba umphakathi. Tum: lokho kusho sonke! iminyango zethu mazime ikuvulekele.
Electrical kanye Computer Engineering
Ezemidlalo futhi Health Sciences
Uyafuna discuss Technical University of Munich ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Izithombe: Technical University of Munich Facebook ezisemthethweni
Heinrich Heine University Dusseldorf Dusseldorf